Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo waxaa uu 4-tii June ee sanadkan, Garoonka Koonis ka ballan-qaaday in uu 3 bil gudahood wax uga qaban-doono cadaaladda dalka, isaga oo yiri:
“Waxaa noogu soo xigta Cadaaladda oo aan ballan idiinka qaaday ammaano iyo amni, waa hawl is wadata oo aan hadda wadno, caddaaladda soo fiiirsada, soo ogaada, saddex-da bil ee soo socota waxa aan ka qabanno, waa ay dhammaatay umaddan Soomaaliyeed ee dhibaateysan in xaqooda ay heli waayaan, ragga odoyaashaa oo xaakimiinta ah waxaan idiin sheegeynaa haddii awal ay jireen in guryo aad xukuntaan shan shan jeer oo isku rogtaan waqtigeeda wuu dhamaaday, In hooyo ooneysa ama qof xaqiisa u ooyaya aad dhibaateysaan waqtigeeda wuu dhamaaaday, Caddaalad baa la idiin ka rabaa, haddii aad caddaalad keeni weysaan annaga nama matashaan, shacabka ma matashaan, dowladda ma matashaan, waxaad ku dambeyneysaan xabsi”.
Xaaladda Garsoorka Dalka
Magaalada Baladweyn waxaa ay leedahay Maxkamadda degmada iyo midda gobolka, qarash la’aan dhacday awgeed, maxkamadda degmada ayaa la isugu geeyay dacwooyinka darajada 1aad halka maxkamadii gobolka loo badalay racfaan, Buul-bade, Jala-laqsi, Maxaas iyo Matabaan wax garsoor ah ma leh.
waa muumul kale oo garsoor la’aani ka jirto, hey’adaha garsoorka iyo cadaaladda ee 4ta ah sida Booliiska, xeer ilaalinta, xabsiga iyo garsooyaal inta ma joogaan, waxaa marar qaar dhacdo in garsoor la helo iyada oo aan dhinacyada kale joogin, taasi oo cadaalad darro keeni karta, wixii Galmudug ka dhaco waxaa lagu xaliyaa qaab beeleed!!
Maaamul Goboleed, waxaa ay Goobjoog News soo gaasriiyay warbixin sheegeysa in uu u dhisan yahay garsoorka maamulka sida Makamad sare , oo ah mid a ugu sareysa ee Koonfur galbeed, sadex maxkamadood oo ah heerka racfaanka ah sida maxkamadda Racfaanka gobolka shabeelha hoose, maxkamadda racfaanka Bakool maxkamadda racfaanka Bay. Iyo sidoo kale Maxkamadaha Baydhabo, Buur-hakabo, Xudur, Wanla-weyn, Afgooye iyo Baraawe….Dhammaan garsoorkaas la sheegayo waa mid aananan shaqeyn oo magac u yaal ah!!
Garsoorka hadda dalka lagu dhaqo waa midkii ay ka tagtay dowladdii dhexe 1991-kii, waxaa ay dhibaato ka jirtaa iswaafajinta nidaamkaasi iyo midka federaalka ah.
Dhisme Garsoor Federaal Ah:
Weli ma bilaaban ka hadlidda nidaamka federaalka ah, Garsoorka dalku wuxuu noqonayaa sadex Heer oo kala ah: (a) Maxkamada Dastuurka (b) Maxkamadaha Heer Dawlad Federaal; iyo (c) Maxkamadaha Heerka Dawladaha xubinta ka ah Dawlada Federaalka. Maxkamada ugu saraysa dalka ee Heer Federaal waa Maxkamadda Sare ee Federaalka, iyadoo Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka iyaguna yeelanayaan Maxkamad Sare ee heer Dawladaha Xubinta ka ah federaalka oo iyaga u gaar ah.
Dhismaha Golaha Adeegga Garsoorka:
Qodobka 109 ee dastuurka waxaa uu ka hadlayaa dhismaha Golaha Adeegga Garsoorka, golahan waa uu laalan yahay, illaa iyo hadda lama oga wax ku dheggan, golaha waa midka hawsha guud ahaan garsoorka ku xiran tahay.
Asaaska Maxkamadda Dastuurka:
Dastuurkani wuxuu aasaasayaa Maxkamadda Dastuurka oo ka kooban shan garsoore oo uu ku jiro Garsooraha Sare iyo ku xigeenka Garsooraha Sare, shaqadan weli ma bilaaban
Soomaaliya garsoorka hadda ka jira waa mid qabyaalad ku dhisan ama 4.5 ah, tusaale ahaa ururka qareennada oo xaruntoodu tahay Muqdisho tiradooda waa 91 qareen, waxaa lagu fadhiyaa qaab 4.5 ah, maamul goboleed kasta waxaa uu leeyahay tiro qareenno ah oo la yaqaanno sida 35 qareen oo Puntland ka socota, 34 Koonfur galbeed ah..maamul walba dad ayaa u matalaya…dad badan ayaa isweydiinaya ma goob cilmi iyo proffis mise aqoonta ayaa qabiil gashay.
Caqabadda ugu weyn ayaa ah:
in garsoorayaashaasi ku yimaadeen xeer madaxweyne, waxaa ay shaqada ka tagi karaan marka ay madaxweynaha u soo jeediyaan Golaha Adeegga Garsoorku isagana uu saxiiso, golohii soo jeedin lahaa maba dhisna!
Ballantii madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo ee la xiriirtay cadaaladda iyo garsoorka dalka, waxaa xaqiiqo noqotay in aan 3dii bil ee la soo dhaafay aan waxba laga qaban, waa ballan-qaad kale ee uu madaxweynaha ku guul-dareystay, waa “Qawda maqashii waxna ha u qaban” !